Ceol na Mara, Doughmore, Doonbeg, Co. Clare - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Christina
I-Ceol na Mara Cottage inikezela ngendawo yokuhlala endlini encane esanda kulungiswa enamagumbi okulala amathathu namagumbi okugeza amabili. Itholakala endaweni yokulima ethule ku-Wild Atlantic Way futhi eduze kwezindunduma zolwandle lwase-Doughmore, ebangeni lokuhamba ngezinyawo ukusuka ekungeneni kwe-Doonbeg Golf Resort e-Atlantic Ocean ogwini oluseNtshonalanga lwe-County Clare.
Umlilo kagesi, i-smart TV kanye nefenisha yekhwalithi yesikhumba kuzokwenza ukuhlala kwakho lapha kukhululeke futhi kukhululekile. Jabulela izinsuku ezinhle kuvulandi ngefenisha yangaphandle kanye ne-BBQ. Izingane zinendawo eningi yokudlala otshanini obuvalekile kakhulu.
I-inthanethi ye-WiFi yamahhala iyatholakala.
Kukhona ikhishi elikhulu elivulekile elivulekile, indawo yokudlela / yokudlela efinyelela kuvulandi, isitofu sikaphethiloli esiqinile kanye ne-TV yesikrini esiyisicaba. Ikhishi elenziwe ngokwezifiso linazo zonke izinto zikagesi ozifunayo ekhaya lamaholide lesimanje.
Indlu ingalala abantu abayisi-6 ngokunethezeka emakamelweni okulala ama-double ama-3, wonke aphansi. Igumbi elilodwa lokulala eline-ensuite neshawa / WC, kanti igumbi lokugezela lomndeni elibanzi linikeza ubhavu neshawa ehlukile.